हिमाल खबरपत्रिका | हाउजिङमा बसाइ
हाउजिङ भन्नाले एकै प्रकारका बनावट र रङरोगनले सजिएका सामूहिक बसोबास भएका घरहरुलाई जनाउँछ । हाउजिङमा नियमित पानीको व्यवस्था, बिजुली, व्यवस्थित पूर्वाधारसँगै पौडीपोखरी, बालबालिका खेल्ने ठाउँ, सुरक्षाको प्रबन्ध तथा खुला ठाउँ रहेको हुन्छ । शान्त वातावरणमा बस्न मन पराउनेहरुका लागि हाउजिङ उपयुक्त मानिन्छ ।
त्यसो त हाउजिङको बसाइ नेपाली परम्परा होइन । तर, बढ्दो शहरीकरणले ठूला शहरहरुमा हाउजिङको आकर्षण बढिरहेको छ । उपत्यकामा चोभार, धापाखेल, इमाडोल, भनिमण्डल, हात्तीवन, बालकोट, धापासी, सीतापाइला, बाँसबारीलगायतका स्थानमा हाउजिङ निर्माण गरिएका छन् । डेढदेखि साढे दुई तलासम्मका हाउजिङ बनेका छन् ।
डा. रुपक भारी दुई वर्षदेखि धापाखेलस्थित सिभिल होम्सको हाउजिङमा बसिरहेका छन् । पोखराका डा. भारी कामको सिलसिलामा काठमाडौं नै बस्नुपर्ने भयो । तर, पानी अभावले सतायो । “पोखरामा पानीको समस्या नै थिएन, त्यसैले पनि हाउजिङ नै रोजें”, कुपण्डोलस्थित डायबेटिज, थायरोइड एण्ड इन्डोक्रिनोलोजी केयर सेन्टरमा कार्यरत उनी भन्छन् । खुला ठाउँ, स्वीमिङ पुल, जीमलगायतका सुविधा भएको हाउजिङमा कुनै समस्या आइपरे हाउजिङभित्रकै सामुदायिक समितिमार्फत समाधान खोजिन्छ । सामूहिक चाडपर्व समेत मनाउँछन् । उनी खुला ठाउँ, हरियाली, धूलो, धुवाँ नभएकोले बस्नका लागि हाउजिङ सजिलो भएको बताउँछन् ।
डा. भारीले बूक गरेको डेढ वर्षमा हाउजिङ पाएका थिए । उनले केही समयअघि मात्रै निर्माणाधीन अर्को हाउजिङसमेत बुकिङ गरिसकेका छन् ।
हाउजिङ कम्पनीले न्यूनतम एकदेखि तीन वर्षभित्रमा घर हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । सिभिल होम्सका मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठ सबै भौतिक पूर्वाधार एकै ठाउँमा हुने भएकाले पनि हाउजिङको महत्व बढेको बताउँछन् । पहिले पैसावाल मात्रै बस्ने भनिएको हाउजिङमा पछिल्लो समय मध्यमवर्गका मानिसको चासो बढेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अहिले वर्गीय विभेद घट्दो छ ।”
एक दशकदेखि उपत्यकामा घर बिक्रीवितरण तथा भाडाको मध्यस्थता गर्दै आएको नेपाल होम सर्चका निर्देशक प्रकाश सुब्बा भूकम्पपछि अपार्टमेन्टको तुलनामा हाउजिङ किन्ने, भाडामा लिनेको संख्या बढेको बताउँछन् । “पानीको चिन्ता गर्नु नपर्ने, घर, सवारीसाधनको सुरक्षा हुने भएकोले हाउजिङको माग बढेको छ” उनी भन्छन्, “धेरैले फर्निचर सुविधासहितको हाउजिङ रोज्ने गर्छन् ।” बस्नका लागि मात्र नभई सम्पत्तिको रुपमा समेत हाउजिङ खरीद गर्ने र भाडामा दिने चलन पनि बढेको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न हाउजिङ कम्पनीले निर्माण क्षेत्र, सुविधा र क्षेत्रफलको आधारमा हाउजिङको मूल्य तोक्ने गरेका छन् । ग्राहकको चाहना, परिवारको आकार, आर्थिक अवस्था जस्ता विषयलाई ख्याल गरेर हाउजिङ बनाइदिने पनि गरिएको छ । हाउजिङ किन्नुअघि पूर्वाधार, सुविधासँगै कम्पनीको ख्याति पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।